बीमा कम्पनीको नाफा २२ प्रतिशतले वृद्धि - Aarthiknews
नयाँ तीन निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये अजोड इन्स्योरेन्स नाफा कमाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा बलियो देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा अजोडले रू. ७७ लाख खुद नाफा कमाएको छ । समग्रमा समीक्षा अवधिमा तीन नयाँ कम्पनीले रू. २ करोड १० लाख नाफा कमाएका छन् । अजोड, सानिमा जनरल र जनरल इन्स्यारेन्सले २०७५ असारदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । यो तस्बिर तथा समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।